Otu esi agbanyụọ Chọta My iPhone | Nzukọ mkpanaka
Edere Ferreno | 06/10/2021 12:16 | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Ndị ọrụ nwere ngwaọrụ Apple nwere ọtụtụ ngwaọrụ nchekwa n'aka ha. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ Chọta My iPhone, dị maka ekwentị nke ụlọ ọrụ America. Nke a bụ atụmatụ emebere ka anyị nwee ike ịchọta ekwentị anyị ma ọ bụrụ na furu efu ma ọ bụ ọ bụrụ na ezuru ya. Yabụ na ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị ahụ nwere ike ịbara ọtụtụ mmadụ uru.
Ihe a na -emekarị bụ na a na -eme ka ọrụ a na -arụ ọrụ oge niile, ebe ọ bụ na ọnwụ ma ọ bụ izu ohi anyị ga -enwe ike chọta iPhone m wee si otú a chọta ekwentị. Agbanyeghị na ọ bụrụ na anyị na -akwado ire iPhone anyị ma ọ bụ na anyị ga -akwụsị iji oge ahụ akọwapụtara, ọ ka mma ịkwụsị ọrụ a. Nke a bụ ihe Apple n'onwe ya kwadoro.
Ọ bụrụ na anyị ga -akwụsị iji ekwentị ahụ, ma ọ bụ n'ihi na anyị ga -ere ya ma ọ bụ na anyị ga -enye ya mmadụ, a na -atụ aro ka ị gbanyụọ ọrụ a. Dịka anyị kwuru, ọ bụ ihe Apple n'onwe ya na -akwado ndị ọrụ. Ọ bụrụ na anyị ekpebiela ime nke a, enwerekwa usoro nke nsonaazụ nke anyị ga -eburu n'uche, site na ohere ịnweta usoro ọrụ na nhọrọ. Ebe ịgbanyụ ọrụ dị ka nke a ga -enwe mmetụta doro anya, nke anyị ga -agwa gị n'okpuru.
1 Gbanyụọ Chọta My iPhone
2 Kedu ihe ga -eme ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ njirimara a?
3 Mfu data
4 Hichapụ ngwaọrụ site na iCloud
Gbanyụọ Chọta My iPhone
A ga -eme usoro a na ajụjụ gị na iPhone, na ekwentị ahụ ị ga -akwụsị iji ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọghị iji ọrụ a ọzọ, mgbe ahụ ị nwekwara ike ime ya. Ụzọ iji gbanyụọ Chọta My iPhone dị mfe, yabụ na ọ ga -adịrị onye ọ bụla mfe. Ndị a bụ usoro anyị ga -eso na ekwentị anyị:
Mepee ntọala na ekwentị gị.
Pịa na aha gị.
Gaa na nhọrọ ma ọ bụ ngalaba nke Chọta.
Kpatụ nhọrọ Chọta iPhone m wee pịa na nhọrọ iji gbanyụọ ya.
Tinye paswọọdụ Apple ID gị.
Site na usoro ndị a, anyị agbanyụla ọrụ a na ekwentị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime otu ihe ahụ na iPad, usoro a bụ otu, naanị anyị ga -ahọrọ nhọrọ Chọta iPad m, nke na -egosi n'otu ngalaba ahụ anyị kwuru na mbụ. Yabụ ị nwere ike gbanyụọ ọrụ nke ịchọ ma ọ bụ chọta ngwaọrụ Apple gị ọ bụla n'oge achọrọ. Ọ bụ ihe nwere ike ịdị mma mgbe ị na -ere ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị iji ya.
Ọ bụrụ na ịzụtara ekwentị ọhụrụ ma chọọ iji ọrụ a na ya, Ị ga -enwe ike ịgbalite ya site na isoro otu usoro ndị a na anyị esorola maka imebi ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga -enwe ike ịchọta iPhone gị oge niile ọ bụrụ na furu efu ma ọ bụ zuo ohi.
Kedu ihe ga -eme ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ njirimara a?
Echiche nke Chọta iPhone m bụ na anyị ga -enwe ike chọta ekwentị ezuru ma ọ bụ furu efu. N'iji ọrụ a, a ga -egosipụta ebe ngwaọrụ a na -ekwu okwu na maapụ ka ọ dị mfe ịchọta ya. Tụkwasị na nke a, a na -enye anyị nhọrọ dịka ime ka ọ na -ebute ụda, ka anyị wee nwee ike ịchọta ya na oghere ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ ihe karịrị akarị. Ọrụ a na -enye anyị ohere igbochi iPhone ahụ site n'ebe dị anya, ka a ghara igbochi ndị ọzọ iji ekwentị anyị. Nke a nwere ike bụrụ nnukwu enyemaka ma ọ bụrụ na anyị agaghị enweta ekwentị ahụ ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị ekpebiela gbanyụọ njirimara a, anyị na -efu ohere ịnweta nhọrọ ndị a. Nke ahụ bụ, anyị agaghịzi enwe ike ịchọta iPhone nke furu efu ma ọ bụ zuru ma hụ ya na maapụ, ọ gaghị enwe ike ime ka ọ wepụta ụda ma ọ bụ nwee ike gbanyụọ ya na anya. Ihe ga -esi na ya pụta doro anya n'echiche a, yabụ na ọ bụghị ihe akwadoro ka ịme ma ọ bụrụ na ị ga -aga n'ihu na -eji ekwentị gị, n'ihi na ị ga -etinye nnukwu ihe egwu ma ọ bụrụ na ezuru ekwentị gị ma ọ bụ furu efu.
Chọta My iPhone na -ejikwa ekwentị ma agbanwu na agbanyụ. Dị ka o kwesịrị, ekwesịrị ịgbanwuo ngwaọrụ ahụ ma jikọọ na Ịntanetị iji nweta ọnọdụ nke ka nke ọma, yana ịdị ngwa ngwa otu a. Agbanyeghị na ọ bụ ọrụ na kemgbe mwepụta nke iOS 13 na -arụkwa ọrụ ma ọ bụrụ na ekwentị agbanyụrụ. Nke a bụ ihe ga -enyere anyị aka oge niile iji chọta ngwaọrụ anyị dị mfe na ngwa ngwa o kwere mee, yabụ ọ bara uru iji ya na ekwentị.
Apple na -atụ aro naanị nke ahụ gbanyụọ Chọta My iPhone mgbe ị ga -akwụsị iji ekwentị ahụ. Ebe ọ bụ na ịchọghị idafu ohere ịchọta ekwentị gị ma ọ bụrụ na ị ka na -eji ngwaọrụ ahụ. Karịsịa ma ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe nlereanya ọhụrụ, ọ bụrụ na ọnụ ahịa mfu ya dị elu, yabụ na ị ga -agbanyụ ọrụ a naanị mgbe ị na -eme atụmatụ ịkwụsị iji ekwentị (ị kwụsịrị iji ya, ị ga -ere ya). ma ọ bụ ị nye ya). Ị ga -ezere ọtụtụ isi ọwụwa n'ụzọ dị otu a site na ime ka ọrụ rụọ ọrụ na iPhone gị.
Otu uru dị ukwuu n'iji Chọta My iPhone bụ na anyị nwere ike Naghachi data site na ekwentị ahụ anyị furu efu ma ọ bụ ezuru anyị ohi. Ọ bụrụ na anyị enwekwaghị olileanya na anyị ga -eweghachi ya, n'ihi na ọ tere aka nke ukwuu ma ọ bụ kwụsị inye mgbaama, dịka ọmụmaatụ, Apple na -enye anyị ohere iweghachite data na ngwaọrụ a oge niile. Ọ bụ otu n'ime ọrụ kacha mkpa, n'ihi na ọ ga -enyere anyị aka n'ụdị ọnọdụ ndị a. Anyị agaghị enwe ike iweghachite ekwentị, mana opekata mpe, a ga -echekwa data niile ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị nwere mere mkpebi iji gbanyụọ njirimara a na iPhone na anyị ga -aga n'ihu na -eji, anyị na -ahapụkwa ọrụ a n'ime ya. Nke ahụ bụ, mgbe anyị kwuru nke ọma Chọta iPhone m, anyị na -ekelekwa ọrụ ya niile, dịka anyị kwuru na mbụ. N'ime ha anyị na -ahụkwa mgbake nke data na ngwaọrụ a furu efu ma ọ bụ zuru. Nke a bụ ihe nwere ike bụrụ nsogbu ma ọ bụrụ na ekwentị a efunahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere data dị mkpa.
Nkwenye bụ na ọ bụrụ na anyị ga -emebi Chọta iPhone m na ekwentị anyị na -aga n'ihu na -eji (na -eso usoro dị na ngalaba nke mbụ), ka anyị mee ya tupu ịme nke a. ndabere data ekwentị niile n'igwe ojii. Nke a bụ ụzọ opekata mpe hụ na mfu data ma ọ bụrụ na ezuru ohi ma ọ bụ mfu ekwentị ga -adị ntakịrị. Ị maghị ihe nwere ike ime na ngwaọrụ a, yabụ inwe nkwado data ga -enyere anyị aka, ọ dịkarịa ala, nwee nchekwa data ahụ.
Hichapụ ngwaọrụ site na iCloud
Ọ bụrụ na anyị abanye na iCloud site na weebụ Anyị nwekwara ike ịnweta faịlụ ma ọ bụ ntọala dị iche iche anyị nwere na ngwaọrụ Apple anyị nwere. N'ime nhọrọ ndị ahụ anyị na -ahụkwa ohere ịnweta ọnọdụ nke ngwaọrụ ndị a, dị ka iPhone, iPad, Mac ma ọ bụ Apple Watch. N'ezie, ọ bụrụhaala na anyị nwere ọrụ Chọta My iPhone arụ ọrụ n'ime ya, ma ọ bụghị na ọ gaghị enwe ike ịme nyocha ahụ.
Ruo nwa oge gara aga, e kwere ka anyị gbanyụọ ọrụ a na weebụ, mana Apple ewepụla ya. Kama anyị nwere ike iwepu ngwaọrụ n'ime ọrụ. N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na enwere ngwaọrụ anyị kwụsịrị iji ma ọ bụ na -aga ime n'oge adịghị anya, dịka ọ dị na iPhone a, anyị nwere ike ịga n'ihu wepu ya na listi ngwaọrụ a na iCloud. Ọzọkwa, nke a bụ ihe anyị kwesịrị ime naanị mgbe anyị ga -akwụsị iji ekwentị ahụ. Ọ bụrụ na anyị ere ya ma ọ bụ kwụsị ịkwụsị ya, mgbe ahụ anyị nwere ike ime nke a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a, usoro ị ga -eso bụ:
Tinye site na ihe nchọgharị gaa na iCloud webụ (mee ya na kọmputa gị).
Pịa na akara ngosi ọchụchọ.
Chọọ na maapụ.
Họrọ ngwaọrụ ịchọrọ ihichapu, na nke a chọọ iPhone ịchọrọ ihichapu.
Pịa na nhọrọ nke na -ekwu Hichapụ iPhone.
Ọ bụrụ na enwere karịa otu ngwaọrụ, megharịa usoro a maka ngwaọrụ ndị ahụ.
Mgbe anyị mechara nke a, a ga -ehichapụ ọdịnaya niile na ntọala dị na ngwaọrụ a a na -ekwu okwu ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịme usoro a ka ị na -ahụ. Mgbe anyị mechara usoro ndị a, ọ gaghịzi ekwe omume ịchọta iPhone a site na iji iCloud, na mgbakwunye na enweghị ike ịchọta ya site na iji Chọta My iPhone, ebe ọ kwụsịrị ọrụ a na mbido. Yabụ na nke a bụ ihe dị mkpa na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi agbanyụọ Chọta My iPhone